Mifanome tanana izao ny Agents Travel India sy ny Birao Fizahantany Nepal
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Mifanome tanana izao ny Agents Travel India sy ny Birao Fizahantany Nepal
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao Mafana Nepal • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
India sy Nepal dia mitambatra
Nanao sonia Memorandum of Understating (MOU) tamin'ny 22 Oktobra 2021 ny Fikambanan'ny Travel Agents of India (TAAI), niaraka tamin'ny Birao fizahan-tany Nepale hampiroboroboana sy hanatsarana ny fizahan-tany roa tonta.
Ny MOU dia mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny tombontsoan'ny tsirairay sy ny fahatongavan'ireo mpizahatany amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa amin'ny fototra.
Jyoti Mayal, Filoha, TAAI, dia nilaza fa mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny vokatra fizahan-tany izy ireo izay ahitana ny fanampiana avy amin'ny firenena roa tonta amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany.
Hotanterahina amin’ny alalan’ny hetsika, seho an-dalambe, fihaonambe, fihaonana an-tampony, webinars, sns, hanehoana ny fahaizan’ny fizahantany ny firenena roa tonta.
Jyoti Mayal dia nampita sy nihevitra fa India sy Nepal mizara sisintany ary noho izany dia tokony hampivelatra fizahantany bebe kokoa ny firenena roa tonta, indrindra taorian'ny areti-mifindra. Samy takiana mba ho stratejika kokoa sy hifanaraka amin'ny fenitra vaovao sy paikady ara-barotra. Ny fizahan-tany any amin'ireo firenena roa ireo dia afaka mahita fitomboana lehibe ary mety ho tsena loharano voalohany.
Anoop Kanuga, mpikambana ao amin'ny komity mpitantana, TAAI, dia naneho ny fankasitrahany ary nisaotra an'i Dr. Dhananjay Regmi, tale jeneralin'ny Nepal Tourism Board (NTB), sy ny ekipany manontolo noho ny fanohanana sy ny fiaraha-miasa natao tamin'ny TAAI. Nasongadiny ny fifandraisana efa hatry ny ela na i India sy i Nepal ary ny fomba nandraisan'ny TAAI anjara tamin'ny fanamafisana sy fanamafisana izany amin'ny fanamorana ny dia sy ny varotra eo amin'ny firenena roa tonta.
Ny hetsika manokana dia azo ampidirina ao anatin'ity MOU ity, ary ny roa tonta mifototra amin'ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifampidinihana dia hamolavola paikady hampiroboroboana sy hanatsarana ny fizahan-tany roa tonta, hoy i Jay Bhatia, filoha lefitra.
Bettaiah Lokesh, Sekretera jeneralin'ny Voninahitra, dia nanantitrantitra ny ilàna ny fanamorana ny fanasana mifanandrify amin'ny hetsika isan-taona isan-taona, anisan'izany ny fihaonambe, fivarotana fivahinianana, ary hetsika hafa ad-hoc nasionaly sy isam-paritra, ary nisaotra ny NTB noho ny fanekena hampiditra ny soso-kevitra ao amin'ny MOU.
Ny fifanakalozam-baovao, izay mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny tetik'ady fampivoarana ny fizahantany momba ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa, ny fanadihadiana, ary ny angona hafa, sns., dia teboka iray tsy manam-paharoa nampidirina tao amin'ny MOU, hoy i Shreeram Patel, mpitahiry vola.